Uthotho lokumisa uchungechunge, ukuLinganisa iiVili zaMavili, iHockey Series-Qianchuan
Zinc ingxubevange Door Stops Series 008A
Zinc ingxubevange Door Stopper Series 2001-mnyama
Zinc ingxubevange Door Guard Series 001-1 anti ucango ucango ucango
Sivelisa ubungakanani obahlukeneyo, iimilo, izixhobo, ubugcisa bokuprinta kunye neetshiphusi; Elungiselelweyo isicelo sakho. Ukusuka kumaza asezantsi ukuya kwi-ultra-high frequency okanye ungakhetha ii-chips zoqobo okanye ezifanelekileyo. Akukho mgaqo-nkqubo ubuncinci be-odolo osinika ukuba sibe bhetyebhetye ekuphenduleni kuzo zonke iimfuno zabathengi bethu.
hlola ingqokelela yethu
Umnyango weSango lokumisa engenacingo 932 SOLID （304SS）
Uhlobo lwesiTshayina Hook Series 359-505 （3-9）
Uluhlu lwamavili olujingayo 208-01 sliver
Umnyango wokumiswa komnyango wokufakwa komnyango-intshayelelo kwindlela yokumisa emnyango
Isimamisa ucango sisixhobo esincinci emva kocango ngalunye oluthintela ucango ukuba lubethe eludongeni. Nangona isimamisi incinci, inefuthe elikhulu. Isimamisi emnyango sinokunciphisa ingxolo kwaye sithintele umnyango ungqubane nodonga kwaye wenze umonakalo emnyango okanye eludongeni. Umgangatho emnyango sucti ...
Isiqingatha senyanga Misa ngerabha
Ugcina njani uMnyango umile? I-Stop Stop, ekwabizwa ngokuba kukuchukumisa ucango, ikwalucango emva kokuvula isixhobo sokutsala, ukuze kuthintelwe ukuvuthuza komoya okanye uchukumise ucango kwaye luvalwe. I-Stop Stop yahlulahlulwe yangumazibuthe ongapheliyo umnyango wokumisa kunye nomnyango we-electromagnetic Misa iintlobo ezimbini, ...
Kuyinto eqhelekileyo kuqhelekile ukufaka iZinc Alloy Door Stop ngasemva komnyango. Umnyango omncinci wokutsala, akukho ndima incinci, unokuwuphepha umnyango ngomonakalo ongafunekiyo, ukusetyenziswa kwangaxeshanye kulunge kakhulu indlela yokufaka iZinc Alloy Door Stop suction ukumisela uyilo Okokuqala ...
Indlela yofakelo yokuma emnyango
Ukuma emnyango okuqhelekileyo ngokwendlela yokufaka kuhlulwe kuhlobo lofakelo lwodonga, uhlobo lofakelo lomhlaba, uhlobo lweplastiki, uhlobo lwentsimbi ngokwezixhobo zodonga lokumisa ucango lwe-electromagnetic ngokungqinelana nolwakhiwo olwahlulwe ...
Imvelaphi yamavili omnyango
Imvelaphi yamasondo eminyango: Ngokutsho kweMbali Jikelele yeHlabathi, amavili aqala ukubonakala eMesopotamiya, nase China, amavili avela nge-1500 BC. Ngokuqengqa ivili, ukukhuhlana nomhlaba oqhagamshelanayo kunokuncitshiswa kakhulu, kwaye izinto ezinzima c ...